1 Mpanjaka 22 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 22
Ny niarahan'i Akaba sy Josafata niady tamin'ny Siriana - Ny nahafatesan'i Akaba sy Josafata ny mpanjakan'i Jodà - Okoziasa mpanjakan'Israely.
1Nandry fahizay ny tany nandritra ny telo taona, fa tsy niady i Siria sy Israely. 2Nony tamin'ny taona fahatelo, nidina nankany amin'ny mpanjakan'Israely, Josafata mpanjakan'i Jodà. 3Ary hoy ny mpanjakan'Israely tamin'ny mpanompony: Fantatrareo va fa antsika Ramota any Galaada no tsy manao na inona na inona isika mba hanatsoaka azy eo an-tanan'ny mpanjakan'i Siria? 4Dia hoy izy tamin'i Josafata: Mba hiaraka amiko hamely an'i Ramota any Galaada va hianao? Ka hoy ny navalin'i Josafata tamin'ny mpanjakan'Israely: Hahazo ahy ny hahazo anao, ary hihatra amin'ny oloko ny hihatra amin'ny olonao, ary hihatra amin'ny soavaliko ny hihatra amin'ny soavalinao. 5Ary tamin'izay Josafata niteny tamin'ny mpanjakan'Israely hoe: Miangavy anao aho, mba hanontany ny tenin'ny Tompo ankehitriny. 6Dia novorin'ny mpanjakan'Israely ny mpaminany tokony ho efa-jato lahy, ka hoy izy tamin'izy ireo: Handeha hamely an'i Ramota any Galaada va aho, sa tokony hijanona? Ka hoy ny navalin'ireo: Mandehana, fa atolotry ny Tompo eo an-tanan'ny mpanjaka izany. 7Nefa hoy Josafata: Moa tsy misy mpaminanin'ny Tompo intsony va eto, azontsika anontaniana koa? 8Dia hoy ny mpanjakan'Israely namaly an'i Josafata: Mbola misy lehilahy anankiray ihany eto, azontsika anontaniana amin'ny Tompo, dia Mikea, zanak'i Jemlà; nefa halako izy, satria tsy mba maminany soa ho ahy, fa loza ihany. Ka hoy Josafata: Aza manao izany, ry mpanjaka. 9Izay ny mpanjakan'Israely vao niantso eonoka anankiray, nilazany hoe: Asaovy mankatý miaraka amin'izay Mikea zanak'i Jemlà.
10Tamin'izany ny mpanjakan'Israely sy Josafata mpanjakan'i Jodà, samy efa tafapetraka eo amin'ny seza fiandrianany, sy samy efa niakanjo ny akanjony avy, teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'i Samaria; ary ny mpaminany rehetra, samy naminany teo anatrehan'izy ireo. 11Sedesisa zanak'i Kanaana nanao tandro-by ho azy, ka nilaza hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Ireto tandroka ireto no hanotoanao ny Siriana, mandra-paharingany. 12Ny mpaminany rehetra koa naminany torak'izany, ka nanao hoe; Miakara any Ramota any Galaada, ka maharese, satria hatolotry ny Tompo eo an-tanan'ny mpanjaka izany.
13Ary ilay iraka lasa niantso an'i Mikea dia niteny taminy nanao hoe: Indro fa iray teny avokoa ny mpaminany izao, samy milaza soa ho an'ny mpanjaka, ka mba ampifanaraho amin'ny azy ireo tsirairay avy koa ny teninao, mba milazà soa. 14Fa hoy ny navalin'i Mikea: Velona Iaveh! dia izay holazain'ny Tompo amiko ihany no hambarako koa. 15Nony tonga teo amin'ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy: Handeha hanafika an'i Ramota any Galaada va isika, ry Mikea, sa tokony hijanona kosa? Ary hoy ny navaliny azy: Mandehana, maharese, fa hatolotry ny Tompo eo an-tanan'ny mpanjaka izany! 16Fa hoy ny mpanjaka taminy: Impiry no hiangaviako anao, mba tsy hilaza amiko, amin'ny anaran'ny Tompo, afa-tsy ny marina ihany? 17Dia hoy ny navalin'i Mikea: Indreny Israely rehetra hitako miely eny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry, ka hoy Iaveh: Tsy manan-tompo ireo olona ireo, ka aoka samy hody soa amantsara any an-tranony avy. 18Ary hoy ny mpanjakan'Israely tamin'i Josafata: Tsy efa voalazako taminao va? Tsy mba maminany soa ho ahy io, fa ny loza ihany.
19Dia hoy Mikea: Henoy ary ny tenin'ny Tompo: Efa hitako Iaveh nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany ary ny tafiky ny lanitra rehetra nitsangana teo akaikiny teo an-kavanany sy teo an-kaviany. 20Ary hoy Iaveh: Iza no hanambaka an'i Akaba mba hiakarany any Ramota any Galaada hahafaty azy any? Dia namaly izy ireo, nefa ny iray toy izao, ny iray toy izao. 21Tamin'izay dia tonga ny fanahy, nitoetra teo anatrehan'ny Tompo ka nanao hoe: Izaho no hanambaka azy. Fa hoy Iaveh taminy: Hataonao ahoana? 22Ary hoy ny navaliny: Hivoaka aho, ka ho tonga fanahy mandainga eo am-bavan'ny mpaminany rehetra. Dia hoy Iaveh: hanambaka azy hianao, sady hahomby amin'izany, ka mivoaha ary, ataovy izany. 23Koa indro, Iaveh nanisy fanahy mandainga eo am-bavan'ireo mpaminaninao rehetra eo ireo. Ary Iaveh efa nanonona loza hanjo anao.
24Fa nanatona kosa Sedesiasa zanak'i Kanaana, ka namely ny takolak'i Mikea ary nanao hoe: Fa taiza leity no nivoahan'ny fanahin'ny Tompo tamiko, hiteny amin'ialahy a? 25Ary hoy ny navalin'i Mikea: Ho hitanao izany, amin'ilay andro handehandehananao isan'efi-trano hierenao. 26Dia hoy ny mpanjakan'Israely: Raiso Mikea ka ento any amin'i Amona governoran'ny tanàna sy amin'i Joasa zanaky ny mpanjaka, 27lazao hoe: Izao no lazain'ny mpanjaka: Ataovy an-tranomaizina ity olona ity ka mofom-pahoriana aman-dranom-pahoriana no amelomy azy, mandra-piveriko soa amantsara. 28Fa hoy kosa Mikea: Tsy niteny tamin'ny alalako Iaveh matoa tafaverina soa amantsara hianao. Sady nampiany hoe: Samia mihaino izany hianareo vahoaka rehetra.
29Dia niakatra nankany Ramota any Galaada ny mpanjakan'Israely sy Josafata mpanjakan'i Jodà. 30Ary hoy ny mpanjakan'Israely tamin'i Josafata: Hanao fitafiana hafa aho no handroso any amin'ny ady, fa hianao kosa ny akanjonao ihany entina. Dia nanao fitafiana hafa ny mpanjakan'Israely, ka nandroso tany amin'ny ady. 31Ary nisy didy nomen'ny mpanjakan'i Siria an'ireo roa amby telopolo lahy, lehiben'ny an-kalesiny nataony hoe: Aza mamely na ny kely na ny lehibe fa ny mpanjakan'Israely ihany. 32Nony nahatazana an'i Josafata ny lehiben'ny kalesy, dia nanao hoe: Iny tokoa ny mpanjakan'Israely; sady nitodika nanatrika azy izy hamely azy. Niantso mafy Josafata. 33Ka nony hitan'ny lehiben'ny kalesy fa tsy ny mpanjakan'Israely io, dia nivily niala taminy. 34Tamin'izay nisy kosa lehilahy anankiray, nandefa kitoatoa ny zana-tsipìkany, ka nahavoa ny mpanjakan'Israely, teo anelanelan'ny fikatonan'ny akajom-piadiana sy ny fiarovan-tratrany. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpampandeha kalesiny: Ahodino ka ento miala eto amin'ny ady aho, fa voa. 35Ary nihamafy ny ady tamin'izany andro izany; notohanana ihany ny mpanjaka, hitsangana teo ambony kalesiny, tandrifin'ny Siriana, ary maty izy nony hariva; ny ra tamin'ny ratrany, niraraka tao anaty kalesy. 36Nony efa ho faty ny masoandro, niely eran'ny toby izao antsoantso izao: Samia mody any an-tanànany avy, samia mody any amin'ny taniny avy!
37Toy izany no nahafatesan'ny mpanjaka. Nentina ho any Samaria izy, dia nalevina tany Samaria ny mpanjaka. 38Nony nosasana tao am-parihin'i Samaria ny kalesy dia nolelafin'ny alika ny ran'i Akaba, ary nandro teo ny vehivavy janga araka ny teny voalazan'ny Tompo.
39Ny sisa tamin'ny asan'i Akaba, mbamin'izay rehetra nataony, ny trano ivoara naoriny, ny tanàna rehetra naoriny, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany? 40Nodimandry any amin'ny razany Akaba, ary Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy.
41Tamin'ny taona fahefatr'i Akaba mpanjakan'Israely no nahatongavan'i Josafata zanak'i Asà ho mpanjakan'i Jodà. 42Dimy amby telopolo taona Josafata, fony tonga mpanjaka, ary dimy amby roapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Azoba, zanak'i Salaia. 43Nandeha tamin'ny làlana rehetra nalehan'i Asà rainy izy, sady tsy nivily tamin'izany, fa nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo. 44Saingy ny fitoerana avo tsy rava, ny vahoaka mbola nanohy ny fanateran-tsorona aman-java-manitra eny amin'ny fitoerana avo. 45Ary Josafata nihavana amin'ny mpanjakan'Israely.
46Ny sisa tamin'ny asan'i Josafata, ny herim-po nasehony, ny ady nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà va izany?
47Nofongorany hiala amin'ny tany ny mpijangajanga sisa izay nijanona teo, tamin'ny andron'i Asà rainy. 48Tsy nisy mpanjaka tany Edoma fahizany, fa governora no solo-mpanjaka. 49Nanao sambon'i Tarsisa folo Josafata mba hankany Ofira haka volamena, nefa tsy nankany izy, fa fefika tao Asiongabera ny sambo. 50Dia hoy Okoziasa zanak'i Akaba tamin'i Josafata: Avelao ny mpanompoko hiaraka amin'ny mpanomponao eny an-tsambo. Nefa tsy nety Josafata.
51Ary nodimandry any amin'ny razany Josafata, ka nalevina ao amin'ny razany, ao an-tanànan'i Davida rainy, dia Jorama zanany lahy no nanjaka nandimby azy.
52Tamin'ny taona fahafito ambin'ny folon'i Josafata mpanjakan'i Jodà no vao tonga mpanjakan'Israely tany Samaria Okoziasa zanak'i Akaba, ary roa taona no nanjakany tamin'Israely. 53Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy, dia nandeha tamin'ny làlan-dreniny ary tamin'ny làlan'i Jeroboama zanak'i Nabata, izay nampanota an'Israely. 54Nanompo an'i Baala izy, ary niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'ny Tompo Andriamanitr'Israely tahaka izay rehetra nataon-drainy ihany. >